Vakazara-Vakadzivirirwa US uye EU Vashanyi Vachave Boon KuUK Economy
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » UK Kuputsa Nhau » Vakazara-Vakadzivirirwa US uye EU Vashanyi Vachave Boon KuUK Economy
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Kurwisa • Hurumende Nhau • Health News • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UK Kuputsa Nhau • Akasiyana Nhau
Vakadzi-vakabaiwa zvizere vekuUS uye vashanyi veEU pakupedzisira vanozokwanisa kufamba vasina tarisiro kuEngland.
UK Yekufamba & Yekushanya chikamu chichawana kukurudzira kukuru kubva kumutemo mutsva.
Indasitiri yezvikepe ichafema mweya wekusununguka.
Iyo zvakare inokanda yakakosha lifeline kune nendege uye mabhizinesi mukati meese chikamu.
Virginia Messina, WTTC Senior Vice President uye Acting CEO, vakati: "The Travel & Tourism chikamu - uye neUK hupfumi - ichawana kurudziro huru zvichitevera nhau dzakabaya zvakakwana vaenzi veUS neEU pakupedzisira vanozogona kuenda kwavo vega kuEngland.
"Indasitiri yezvikepe ichatura befu kuti kudzoserwa kwakakosha kwenzvimbo dzepasi rose kubva kuEngland kwakapihwa mwenje wakasvibirira, zvichipa tariro kubazi rakatambura kuti rirambe richinyura.
"Inokandawo nzira yakakosha yekuendesa nendege nemabhizinesi mudunhu rese, nekubatsira kudzorera zvakanyanya kudiwa kwekufamba kweatlantic uye hukama hwakakosha kuEU.
"Zvisinei, kunze kwekunge zvadzoserwa uye US ikapindura nedanho rakafanana, hationi zvakazara.
"Kutsvagurudza kunoratidza kuti denda risati rasvika reUnited States kuUK rakapa mari inopfuura bhiriyoni mana emadhora kuhupfumi muna4, zvichiratidza kukosha kwekufamba kweatlantic.
"Tinoda nekukurumidza matanho akarongeka epasi rese ekuvhurazve miganho kuenda kune dzimwe nyika kuchengetedzeka kune vese vashanyi vakabaiwa jekiseni zvizere kana vanogona kuratidza humbowo hweongororo isina kunaka yeCOVID-19.
"Kubatana kunodzorera kufamba kwenyika dzese, kuve nechokwadi chekudzikiswa kwemaitiro evashanyi vanobayiwa jekiseni, kusimbisa kukosha kwekucherechedzwa kwejekiseni pasi rese, uye kugonesa kushandiswa kwepasirese kwe 'digital health pass'."